विवाह मा पाहुनाहरूलाई उपहार - एक उपयोगी परम्परा!
पहिले, विवाह मा पाहुनाहरूलाई उपहार मात्र युरोप र अमेरिका मा दिइएको थियो। अहिले यो परम्परा झन् हाम्रो देशमा लोकप्रिय बन्दैछ। यी उपहार हो पाहुनाहरूको लागि नवविवाहितहरूका देखि कृतज्ञता चिन्ह विवाहको आए। यो परम्परा धेरै राम्रो छ, र यो पनि उत्सव उपस्थित प्रत्येक आदर र चासो देखाउन मद्दत गर्छ।
परंपरागत, विवाह क्यान्डी बक्से मा अतिथि लागि उपहार भनिन्छ (फ्रान्सेली Bonbon देखि -। कैंडी)। तिनीहरूले साना बक्से वा बैग को मिठाई लुकेका छन् जसमा को रूप मा जारी छन्। सिद्धान्त मा, विकल्प को डिजाइन र भरने सेट गर्न सकिन्छ। सबैका लागि तिनीहरूलाई नै बनाउन, तर तिनीहरूलाई केही ती वा अन्य अतिथिहरूको महत्त्व देखाउन विशेष कुरा हाइलाइट सम्भव छ अनुज्ञेय। यस्तो उपहार को दर्ता आधारभूत नियम - यो पत्राचार विवाह तमाम शैली छ।
कि सम्झना विवाह मा पाहुनाहरूलाई उपहार मानिसहरू उत्सव सम्म एक जबकि लागि देख्ने निमन्त्रणा सुरु। किनभने यसले आत्मा radiate गर्नुपर्छ तिनीहरूले आफ्नो विवाह को पहिचान हुनेछ।
क्यान्डी बक्स, जो को सजावट जस्ता उपहार लागि जाँदा त्यहाँ एउटा ठूलो धेरै छन्। तिनीहरूले भनिन्छ compliments छन्। यो परम्परा हामीलाई नयाँ हुन मानिन्छ भएकोले पाहुनाहरूको अक्सर क्यान्डी बक्से सजावट भाग लाग्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई लाग्न छैन। अन्त विजय मा दिन आफ्नो सबै भन्दा राम्रो, र त्यो किनभने। सबैभन्दा प्रस्तुति लागि सुविधाजनक समय जब दम्पतीले आफ्नो अन्तिम बोली छ।
विवाह मा पाहुनाहरूलाई उपहार प्रतियोगिताहरु सहभागी पुरस्कार को रूप मा जारी गर्न सकिन्छ। विवाह एक परिवार छुट्टी भएकोले, तपाईंले सानो सम्भव प्रतियोगिताहरु रूपमा, प्रतियोगिता implying गर्नुपर्छ। प्रत्येक पार्टीले उपहार नै हुनुपर्छ, पुरस्कार दिन आवश्यक छ। कि सस्तो अर्थहीन trinkets सम्झना - खराब विकल्प हो। उपहार स्मरणीय हुनुपर्छ। त्यसैले, यो उद्देश्य लागि, जवान वा नरम खिलौने को छवि संग उपयुक्त चुम्बक, दुलही र दुलहा र नाम संग कढाई विवाह मिति।
सामान्य, यी स्मृति चिन्ह धेरै विविध छन्। मुख्य कुरा - banal हुन छैन र खराब स्वाद डुब्नु छैन। निम्नानुसार विवाह अतिथि लागि उपहार हुन सक्छ:
तपाईं जो नवविवाहितहरूका चित्र मा सानो पात्रो बनाउन सक्छ। यो उपहार एक लागत प्रभावी छ, र यसको उत्पादन धेरै समय लाग्न गर्दैन।
एक स्मारिका ब्याज रूपमा अतिथि वा दुलही र दुलहा चित्रण गर्ने, केही हास्य विषय सही छ।
यो पनि एउटा उपहार रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किचेनमा। यो सानो तर एक स्मारिका विवाह को एक सुखद र आनन्ददायी अनुभव कायम राख्न एक लामो समय को लागि अतिथि मदत गर्न। निर्माण किचेनमा लागि सामाग्री कुनै पनि सुरूवात चयन गर्नुहोस् र प्लास्टिक बरतन संग समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै वित्तीय सम्भावनाहरू र धन को कल्पनामा भर पर्छ।
एक विवाह मा पाहुनाहरूलाई उपहार मिठाई (क्यान्डी, कुकीहरू, केक, साना चकलेट) को रूप मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले नवविवाहितहरूका फोटोग्राफी, विवाह प्रतीकात्मक रूप वा राम्रो-वचनहरू इच्छा को बस तस्वीर जसमा एक wrapper, मा संलग्न गर्न सकिन्छ।
मूल उपहार एक साबुन आपूर्ति को गरिनेछ। यो तपाईंको अतिथि खुसी र बाथरूम को मुख्य सजावट हुनेछ कि एक हृदय वा चकलेट को आकार मा साबुन हुन सक्छ।
यो पनि धेरै नै सुखद छ र मजा स्मारिका हास्य फारममा बनाइएको पोर्ट्रेट, हुनेछ। सिर्फ एक मजाक क्रोधित हुनु हुँदैन। र उपहार अपमान मा उत्तेजित गर्दछ। यसलाई सिर्जना गर्न, तपाईंले कार्टून ड्र गर्ने विवाह पोर्ट्रेट चित्रकार गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सबै पाहुनाहरूको को पोट्रेट को विजय लागि लेख्छन् र जोडी त्यसपछि तिनीहरूले उत्सव को अन्त मा प्रस्तुत हुनेछ।
मुख्य कुरा को उपहार - छैन मूल्य र originality र ध्यान। अधिक रोचक यसलाई छ, राम्रो यो अतिथि प्राप्त गर्नेछ।
विवाह दर्ता विदेश: राम्रो वा खराब?
मा-व्यवस्था - यो हुनुहुन्छ? डर वा मित्र?
Quads लागि Hairstyles - विवाह विचार
विवाह समारोह - सबै रहस्य
सोचाइ र चेतावनी: विवाह अघि Bachelorette पार्टी
आफ्नो हातमा नयाँ वर्षको सुट - Outfit "ब्लिजार्ड"
Harald Hardrada, Vikings को अन्तिम राजा: जीवनी, इतिहास र रोचक तथ्य
विन्डोज प्रणाली अनुकूलन
कसरी ascites क्यान्सर छ
Sergey Ozhegov - सोभियत भाषाबिद। जीवनी सर्गेई Ozhegova
के मशरूमले मेरो आमालाई खाना खायो? हामी सिक्न सक्छौं!
गोली अवलोकन 4Good T700i3जी: समीक्षा र सुविधाहरू
ज्ञापन पर्यटक: योजना र तयारी - राम्रो छुट्टी कसम
कंगन: आभूषण फेरि प्रवृतिमा